Hotel Conference Introduction - Business Meeting Rooms, Banquet Halls | LOTTE Hotels & Resorts
သင်သည် LOTTE HOTEL REWARDS အဖွဲ့ဝင် ဟုတ်ပါသလား။
Log in နှင့် My Page အချက်အလက်များကို အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းပါမည်။
လော့ဂ်အင်ဝင်ပြီးနောက် ‘စားသောက်ဆိုင် ကြိုတင်မှာကြားမှုများ’ စာမျက်နှာသို့ သွားမလား။
အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သူအဖြစ် ကြိုတင်မှာယူမှုကို ဆက်လုပ်မည်
ဆုချီးမြှင့်မှု အဖွဲ့ဝင် နံပါတ်နဲ့ ID ကို ရှာပါ
သင်သည် LOTTE HOTEL ဆုချီးမြှင့်မှုများ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလား။
FindaHotel My Reservations ကူပွန်များ My Page ေလာ့ဂ္အင္ Logout
LOTTE HOTELHotel Conference
points များ အသုံးပြုခြင်း
လတ်တလော ရှာဖွေမှု ရလဒ်များ မရှိပါ။
Check-in Wed, Jun 29
Check-out Thu, Jun 30
အဝင် (Check-in) နှင့် အထွက် (Check-out) ကာလကိုရွေးပါ
အများဆုံး အခန်းသုံးခန်းအထိ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အခနျးပေါငျးနှငျ့လူမြားကို Select လုပျပါ
အထူးလျှော့စျေးပေးပရိုမိုးရှင်းကုတ်အားအသုံးပြုနိုင်ရန် ဟိုတယ် တစ်ခုအားရွေးချယ်သတ်မှတ်၍ ကုတ်အားထည့်သွင်းပါ။
My Reservations ကျွန်ုပ် အနှစ်သက်ဆုံးအရာများ ကူပွန်များ Logout
FindaHotel LOTTE HOTELS အကြောင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု အသေးစိတ်အချက်များ
LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈမ်ား အဆင့္
Rooms 1 Adults 1 Children 0
Adults *၁၃ နှစ်နှင့်အထက်
Children *အသက် ၂နှစ်မှ ၁၂နှစ်
Favorites (နှစ်သက်သည်များ) သို့ ပေါင်းထည့်ရန်အတွက် လော့ဂ်အင် ဝင်ရောက်ပါ။ သင် လော့ဂ်အင် ဝင်ရောက်လိုပါသလား။
Home Wedding & Conference Introduction
အထူးမိတ်ဆုံစားပွဲများကို LOTTE HOTEL မှာ ဧည့်ခံခြင်းဖြင့် သင့်၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ပိုမိုတင့်တယ်စေမှာဖြစ်ပ
"နိုင်ငံတကာ ညီလာခံများ၊ လုပ်ငန်း နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများနှင့် အသေးစား ညီလာခံများကဲ့သို့သော အခမ်းအနား ပွဲလမ်း အမျိုးမျိုးကျင်းပရေးအတွက် ဂုဏ်ပြု စားသောက်ပွဲများ ပြုလုပ်ရာ ဟောလ်ခန်းမများ၊ ခေတ်မှီနောက်ဆုံးပေါ်အပြင်အဆင်များ၊ နောက်ဆုံးပေါ် မီးအလင်းအမှောင် စနစ်များဖြင့် LOTTE HOTEL ကို အပြည့်အစုံပြင်ဆင်ခင်းကျင်း ထားပါသည်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာ ကွန်ဖရန့်ဆွေးနွေးပွဲများ နှင့် တစ်ဆက်တည်း ဘာသာပြန်ဆို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း နှင့် ဗီဒီယို ကွန်ဖရန့်စနစ်များအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအပြင် စခရင်မျက်နှာပြင်ကြီးမားသော ပရိုဂျက်တာများအား ထားရှိပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ဖြင့် ပွဲအစီအစဉ်များ ကျင်းပရန် ပြီးပြည့်စုံသော နေရာတစ်ခု အဖြစ် ဖန်တီးပေးပါသည်။
LOTTE HOTEL ၏ ခေတ်မှီနောက်ဆုံးပေါ်အခန်းအနားအပြင်အဆင်များ၊ ဖော်ရွှေပျူငှာတဲ့ ဝန်ထမ်းများရဲ့ နွေးထွေးသော ဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် သင့်၏ အစည်းအဝေးများအတွက် အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။"
ဂုဏ္ျပဳ စားေသာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ေဟာလ္ခန္းမ ျမင္က
Banquet Hall View
TEL +82-2-317-7211~3 ခေါျရနျ
TEL +82-2-411-7450~3 ခေါျရနျ
TEL +82-51-810-6500 ခေါျရနျ
TEL +82-64-731-4277~8 ခေါျရနျ
TEL +82-2-759-7553~9 ခေါျရနျ
TEL +82-52-960-4210~2 ခေါျရနျ
TEL +7-495-287-0505 ခေါျရနျ
TEL +84-8-3823-3333 ခေါျရနျ
TEL +1-671-646-6811 ခေါျရနျ
TEL +1-212-303-6071 ခေါျရနျ
TEL +82-2-6009-1000 ခေါျရနျ
TEL +82-2-6116-1000 ခေါျရနျ
TEL +82-64-730-1050~2 ခေါျရနျ
TEL +82-42-333-1000 ခေါျရနျ
TEL +82-2-6210-1068 ခေါျရနျ
TEL +998-71-120-5800 ခေါျရနျ
LOTTE HOTEL Convention Types
We offer ballrooms that can host weddings and international conferences, such as the G20 Conference, WTTC, IEC, ASTA, PATA, ESCAP, and more. Enjoy services based on creativity and experience in modern and refined event spaces.
Small and Mid-sized Events
Lotte Hotel offers the best location for personalized small and mid-sized events. Find an event space withasize that is most suitable for you. Give your eventaboost of elegance with modern facilities and attentive services.
Make your gathering even more special with private services that cater to special gatherings of family or friends, or important meetings.
LOTTE HOTEL အစည်းအဝေး ဝန်ဆောင်မှု
"LOTTE HOTEL သည် အသေးစား အစည်းအဝေးများ မှစ၍ အစည်းအဝေးကြီးများ အထိ အမျိုးမျိုးသော ပွဲများအတွက် အံ့ဝင်ကိုက်ညီသည့် ခေတ်မှီနောက်ဆုံးပေါ်အသုံးအဆောင်များကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
ဒါ့အပြင် တစ်ဆက်တည်းအနေဖြင့် ဘာသာပြန်ဆို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း နှင့် ဗီဒီယို ကွန်ဖရန့်စနစ်များအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအပြင် စခရင်မျက်နှာပြင်ကြီးမားသော ပရိုဂျက်တာများအား ထားရှိပေးခြင်း စသည့် ခေတ်မှီနောက်ဆုံးပေါ် အသုံးအဆောင်များအား ပြင်ဆင်ပေးထားသောကြောင့် သင်၏ အစည်းအဝေးကို LOTTE HOTEL မှာ ကျင်းပခြင်းဖြင့် သင့်၏ ဂုဏ်သိက္ခာတက်စေမှာဖြစ်ပါသည်။"
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်းအဆင့် ဟင်းလျားများဖြင့် ဧည့်သည်တော်များရဲ့ အခမ်းအနားများကို အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
အကြိုက်ဆုံး ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းများ မရှိပါ။
ဝင်ရောက်ပြီးနောက် အကြိုက်ဆုံးအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု၍ စမ်းကြည့်ပါ။
ေလာ့ဂ္အင္ စာရင္းသြင္းရန္ Logout My Page
Voice of Customer Contact Us Careers
Business Inquiry Sitemap
30, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Korea / +82-2-771-1000